(2)I-Irish Pub Enesidlo Sasekuseni Asikho - I-Airbnb
(2)I-Irish Pub Enesidlo Sasekuseni Asikho
479 okushiwo abanye
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Eamonn
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Eamonn izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Traditional Irish Pub yethu itholakala endaweni emaphakathi kakhulu, ngaphakathi kwebanga elihamba ngezinyawo eliyimizuzu emi-5 ukuya kuzo zonke izindawo ezikhangayo zedolobha. Indawo yokupaka itholakala endaweni eyi-100m ngezindleko zama-euro amabili ngosuku. Isiteshi sesitimela/Amabhasi sivaliwe. Twin room en suite, i-wifi yamahhala, itiye/ikhofi, i-TV.
Isivakashi Sinokufinyelela Okuhlukene Kwamahora angu-24 emagumbini asuka endaweni yokucima ukoma.
Ukufinyelela ku-Wifi Yamahhala kanye nezindawo zasekhishini ezabelwana ngazo (Ayikho Umpheki)
4.70 out of 5 stars from 479 reviews
4.70 · 479 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-479
Ngaso sonke isikhathi umuntu okhona ozohlinzeka ngokuxhumana okuningi noma okuncane njengoba izivakashi zidinga
Hlola ezinye izinketho ezise- Kilkenny namaphethelo